यस्तो छ ७ वटै प्रदेशको अन्तिम मतपरिणाम, कुन पार्टीको कहाँ को भए विजयी ? (सूचीसहित) — Sanchar Kendra
यस्तो छ ७ वटै प्रदेशको अन्तिम मतपरिणाम, कुन पार्टीको कहाँ को भए विजयी ? (सूचीसहित)
संघीय सांसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएर मतपरिणाम आएको छ । राष्ट्रिय सभामा एमाले कांग्रेस र माओवादी सिटले जितेको छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा‘बादल’, दीनानाथ शर्मा लगायतका नेताहरु निर्वाचित भएका छन् ।
प्रत्येक प्रदेशबाट एक अल्पसख्यक वा आपङ्गता भएका व्यक्ति, एक दलित , तीन महिला र तीन खुला गरी ८-८ जनाको दरले ५६ जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । एक महिलासहित तीन जना मन्त्री परिषदको राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश १ मा एमाले ५, कांग्रेस २ र माओवादीले एक सिट जितेको छ । प्रदेश १ मा ६ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने एक÷एक दलित र अल्पसख्यक वा अपाङ्गको गरी दुई जना निर्वाचन भएको छ ।